Booliska Baydhabo oo shacabka digniin siiyay, qaraxyo laga cabsi qabo awgeed | Baydhabo Online
Booliska Baydhabo oo shacabka digniin siiyay, qaraxyo laga cabsi qabo awgeed
Taliska Booliska Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, ayaa digniin u diray dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool, waxaana ay uga digeen qaraxyo suuragal ay tahay Shabaab inay la beegsadaan goobaha rayidka ay joogaan.
Mahad C/raxmaan Aadan Taliyaha ciidamada Booliska Koonfur Galbeed oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay heleen xogo ku saabsan isku dayo Shabaab ay doonayaan inay ku qarxiyaan Bulshada Somaliyed.
Wuxuu sheegay Mahad C/raxmaan Shabaab inay doonayaan gaadiid qaraxyo ka buuxaan inay ku laayaan umadda, iyaga oo qorshahooda uu yahay inay dhigaan gaadiidkaasi xarumaha dadka rayidka ay isugu yimaadaan, sida maqaayadaha iyo goobaha kale ee dadka ay fariistaan.
Bulshada Magaalada Baydhabo ayaa wuxuu kaga digay inaysan fariisan goobaha maqaayadaha ah iyo hareerada laamiga, waxaana Booliska ay mamnuuceen in gaadiid la dhigto hareeraha wadooyinka.
“Maalmaha aan hadda ku jirno waxy cadowga umadda waxay ku jiraan diyaar garow ay rabaan iney shacabka ku dhibaateeyaan gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ay rabaan in shacabka masaakiinta ah waxyeello u geystaan, waxaana shacbka uga digeynaa iney hor fariistaan baararka, sidoo kale waa mamnuuc gaadiidka la dhigayo hareeraha waddooyinka.” ayuu yiri taliyaha.
Somaliya sanadahan dambe waxaa ku sii badanaayay qaraxyada gaadiidka ee la dhigo goobaha rayidka ay isugu yimaadaan, iyadoo khasaare xoogan bulshada ay ka soo gaarto qaraxyadaasi.
Isniintii aynu soo dhaafnay ee todobaadkaan ayeey aheyd markii in ka badan 20 ruux oo Shacab ah qaraxyo lagu laayay, kadib markii qarax lala damacsanaa Taliyaha ciidanka Xooga dalka uu qabsaday gaadiid rayid ay saarnaayeen Magaalada Muqdisho.